उसको प्रेम – Janamanch.com
विर्सिएकाहरु जोडिन आउन्छन् । जोडिएर लामोसमयसम्म कुरा गरिरहेकाहरु खोई कुन कारणले हो वा कसरी उनीहरु टाढा हुन्छन् । फेसबुकको एउटा रमाइलो पक्ष के छ भने कसैसँग अन्तरंग कुरा गर्नुपनि आफूलाई आनन्दित महशुस गर्नु हो । यस्तै यस्तै अनौठो प्रसङ्गहरु मध्ये एकदिन । एकदिन एउटा मेसेज आयो । जसको सुरुको र अन्तिम मेसेजमा यस्तो लेखिएको थियो ‘सायद तिमीले मेट्यौपनि होला तर मसँग सुरक्षित छ ।’
त्यो दिन फेसबुक खोल्नेवित्तिकै अनौठो मेसेज थियो कसैको सोचेँ ‘मेट्यौ होला … सुरक्षित छ’ के भनेको होला ?
उसको अर्कोदिन फेरि मेसेज आयो ‘आजभोली त अलिकति भुडी पनि लागेछ छ त ।’
खैर जेसुकै होस यी मेसेजहरु पढ्दैगर्दा किन जोडिन आइपुगी होली भन्ने मनमनै प्रश्न गर्यो । अठारघण्टाअघि अन भएको उनको फेसबुकले देखाइसकेको थियो अब सायद उनी फेसबुक आउने समय भैसकेको हुनुपर्दछ भन्ने सोच्थेँ ।
‘यतिका वर्षसम्म त तिमीले विर्सिएकी थियौ त ।’,
एकवर्षअघि आजका दिन मेरो जन्मदिन थियो फेसबुकका साथीहरुले शुभकामना दिइरहेका थिए । तर मलाई कसैको विशेष शुभकामनाको जरुरी थियो त्यो शुभकामना केवल १२ बजेपछि मात्रै आउथ्योँ । मैले आँखा चिम्म गरे कतिबेला १२ बज्ला र त्यो उसको शुभकामना पढुँला भनेर कुरिरहेँ । १२ बजेर १० मिनेट गएपछि मोवाइलको डाटा खोलेँ उसको शुभकामना पढ्न हतारिएर । उसले लेखी ।
‘मुस्कानको कुनै मोल हुन्न, सम्बन्धको कुनै तौल हुन्न, मान्छेहरु भेटिदैं जान्छन् हरेक मोडमा, तर हर कोही तपाईको तरह अनमोल हुन्न तिम्रो प्रेमले सरकारी अफिस नै बनाइदियो मुटुलाई न काम गर्छ न अरुका कुरा सुन्छ ? केवल धड्किन्छ मात्र । जे भएपनि ह्याप्पी वर्थ डे प्रिय । उही चेहेरा, उही स्टाइल, उही हेराई, उफ तिमी कहिल्यै बदलिएनौ ।’
लामो कुरा गर्नु मलाई कुनै अर्थ लाग्दैन तर तिम्रो ‘सुन्नुन’ भन्ने शब्दले उही पुरानै याद दिलाउँछ प्रीय मैले फेरि लेँखे । ऊ साइन आउट भै ।कहिलेकाँही मनमा अनेक कुराहरु खेल्छन् म सोच्छु भगवानले मुुटु किन छातिभित्र राखिदिएँ सायद शरीर बाहिर भएको भए सधैं मलम पट्टी किन्दै लगाउँदै गर्नुपर्दथ्यो भनेर होला कि? यस्तै उट्पट्याङ्ग कुरा दिमागमा खेल्छ र फेसबुकको स्टाटसमा पनि लेखिदिन्छु ।